Ifekthri Yokuvivinya Umlilo, Abakhiqizi Be-Silicon Carbide Crucible, I-Graphite Crucible - Xtlceramic
◆ Uma ikhasimende linomdwebo, ohlanganisa ubukhulu, izinto zokwakha, izidingo ezikhethekile, khona-ke singenza isikhunta ngokusho komdwebo.
◆ Uma ikhasimende lingenawo umdwebo, kodwa linesampula, isampula lidinga ukuthunyelwa kunjiniyela wethu, sizobe sesikala ubukhulu, futhi senze umdwebo. Bese senza isikhunta ngokusho komdwebo.
ithunyelwe kunjiniyela wethu, sizobe sesikala ubukhulu, futhi senze umdwebo. Bese senza isikhunta ngokusho komdwebo.
Yonke imikhiqizo inempilo yayo yeshelufu, uma kunezinkinga zekhwalithi ngesikhathi sokuphila kweshalofu, sicela usithinte, sihlala sikhona ukuze sikusize. Asenzi ibhizinisi elilodwa nje, kodwa ukufuna ukubambisana kwesikhathi eside, ukufeza isimo sokuwina-win.
Singakwazi ukukhokha nge-paypal, Western Union, Money Gram, T/T, L/C; Isikhathi sokuhola isampula sisezinsukwini eziyi-7-10, isikhathi sokuhola somthamo weMisa yizinsuku ezingama-25-30; Singakunikeza ukwesekwa kobuchwepheshe obuchwepheshile. Futhi imikhiqizo yethu izinga gurantee izinyanga 12..
UKUQHUBEKA KOMKHIQIZOINQUBO :
Okubalulekile → Ukugaya Ibhola → Ukucindezela Okubalulekile → Ukucwenga Kokuqala → Ukucwengisiswa Kwesibili → Umshini wobumba wobumba → Ukubumba Isandla → Ukubumba Okuzenzakalelayo → Ukomisa → Ukomisa → Ukufaka I-Sintering → Imikhiqizo Eqediwe → Ukupakisha Ikhathoni → Ukupakisha Ikesi Lokhuni
● Amasampula wamahhala
Sinikeze isevisi ye-oem/odm iminyaka engaphezu kwengu-13, futhi singenza umkhiqizo ngemidwebo yamakhasimende, futhi singakwazi ukupakisha ngokwezifiso ikhasimende.
Sinikeza izingcaphuno kungakapheli amahora angama-24 futhi sihlela ukuthunyelwa phakathi kwezinsuku ezingama-20-30.